နှင်းဆီတစ်ခင်း ပန်းတစ်ခြင်း: July 2008
ဒေါက်မြင့် ဖိနပ်လှလှ ကြိုက်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးများ အတွက်...
1 comments Labels: ကြည့်စရာ
သီသည် ကောင်းကင်တွင်ပျံဝဲနေသော ငှက်ကလေးများကိုကြည့်ရင်း သူမကိုသူမ ငှက်တစ်ကောင်ဟု ထင်လာသည်။ အတောင်ညောင်းတဲ့ အချိန်မှာ ခဏနားပြီး မသေမချင်း ပျံသန်းနေရမယ့် ငှက်တစ်ကောင်ပေါ့။ အနှစ်သုံးဆယ် ပျံသန်းခဲ့ပြီးတဲ့အထိ ကိုယ်ပိုင် အသိုက်တစ်ခုတောင် မပိုင်သေးတဲ့ ငှက်တစ်ကောင်ပါ။
သီသီမာ ဆိုတာ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ဘာတစ်ခုကိုမှ လောဘတကြီး လိုချင်ခဲ့သူ မဟုတ်ခဲ့ပါ။ တကယ်ပါ... သီငယ်ငယ်က အရုပ်ကလေးတစ်ခု မုန့်ကလေးတစ်မျိုး ကိုမှ လိုချင်လှပါချည့် ရဲ့ ရယ်လို့ ငိုယို မပူဆာတတ်ခဲ့ပါ။ အဖေမရှိတဲ့ အဖြစ်ကိုလည်း ၀မ်းနည်းအားငယ် မေးတာ မြန်းတာ မျိုးလည်း ရုပ်ရှင်တွေ ၀တ္တုတွေ ထဲကလို မလုပ်တတ်ခဲ့။ အဘိုး၊ အဒေါ် နဲ့ အမေ က သီ့ အားကိုးရာ အနေ နှင့် လုံလောက်ပြီဟု ထင်သည်။ ရုပ်ရှင်တွေ ထဲကလို ဘယ်သူက မှလည်း သီ့ကို အဖေ မရှိတဲ့ ကလေးရယ် လို့ မလှောင်ပြောင်စဖူး။ သီ ၇ တန်းမှာ အဖေ ပြန်ရောက် လာ တော့လည်း သီ့ အတွက် ဘာမှထူးထူး ခြားခြား မဖြစ်။ ဒီလိုနဲ့ ပဲ သီ ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။
­­­­­သီငယ်ငယ်က အတန်းတိုင်းမှာ ပထမ ရခဲ့သည်။ နွားခြေရာခွက် ထဲက ဖားသူငယ်လိုပဲ ထင်ပါရဲ့။ သီ့ထက်တော်တဲ့လူ မရှိခဲ့လို့ ဖြစ်မှာပါ။ သီကြိုးစားတာတော့ ကြိုးစားခဲ့သည်။ ပြိုင်ဆိုင်လိုစိတ် အနည်းငယ် လည်း ရှိခဲ့ပါရဲ့ ။ သို့ပေမယ့် မရမဖြစ်ရယ်လို့တော့ အလွန်အကျွံ မကြိုးစားခဲ့စဖူး။ စာမေးပွဲနဲ့ ဝေးရင် ဝေးသလို ၀တ္တုလေး ကာတွန်းလေး ဖတ်လိုက် တီဗွီလေး ကြည့်လိုက်နဲ့ ...။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း မှာတောင် သိပ် လျှော့ခဲ့တာ မဟုတ်။ စာတစ်ခုကို နှစ်ခါ အသင်ခံရမှာ ပျင်းတတ်တဲ့ သီ က ကျူရှင်လည်း တစ်ခုမှ မယူခဲ့။ ဒါပေမယ့်လည်း ဘာသာစုံ ဂုဏ်ထူးထွက်ချင်စိတ် ကတော့ရှိခဲ့သည်။ သူများတွေလို ဆေးကျောင်း တက်ဖို့ရယ် ရည်မှန်းချက် ထားခဲ့မျိုးတော့ မဟုတ်။ သီ့ မိသားစု နဲ့ ဆရာမများလည်း ဂုဏ်တက်စေချင်သည်။ သီကိုယ်တိုင်လည်း ဘာသာစုံ ဂုဏ်ထူးကိုတော့ ထွက်ကိုထွက်ချင်တာ...။ သို့ပေမယ့်လည်း...။
အင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်စိတ်တော့ သီ့မှာ ရှိခဲ့ဖူးသည်။ သီက တိုက်လှလှ ကလေးတွေ ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး ဆောက်ချင်ခဲ့တာ။ ဂုဏ်ထူးမပါတဲ့တစ်ဘာသာ ရဲ့ အမှတ်က အတော်နည်းနေခဲ့သော သီမှာ အင်ဂျင်နီယာ မဖြစ်ခဲ့ရ။ သီ့အိမ်ကတော့ သီ့ကို ဆရာဝန် ဖြစ်စေချင်ပုံပေါ်သည်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက သီကို စာနှင့်ပတ်သက်လို့လည်း ဖြစ်စေချင်တာသာ ရှိလျှက် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆူပူအော်ငေါက်တာမျိုး မရှိခဲ့သော မိဘတွေကို စိတ်ပျက်စေခဲ့ပြီ ရယ်လို့ စိတ်မကောင်းတာ တစ်ခုသာ ရှိလျှက် ဆရာဝန် မဖြစ်ရတာ အင်ဂျင်နီယာ မဖြစ်ရတာ အတွက်တော့ ၀မ်းမနည်းခဲ့။ ဒါပေမယ့်လည်း ထိုအချိန်ကစပြီး သီ ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခု ချခဲ့သည်။ ဘယ်ဘာသာပဲ ရရ Ph.D ဒေါက်တာ တစ်ယောက်တော့ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားမယ် ရယ်လို့ပါ။
တက္ကသိုလ်မှာတော့ နွားခြေရာခွက် မဟုတ်တော့တဲ့အတွက် သီလည်း အတော်ဆုံး မဟုတ်ခဲ့ပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အလယ်အလတ် ဖြစ်အောင်တော့ သီကြိုးစားခဲ့ပါသည်။ သီ တတ်နိုင် သလောက်ပေါ့။ သီက ဘာကို ရည်မှန်းပြီး ဘာကို အဖြစ်ချင်ဆုံးဆိုတာ သီကိုယ်သီ မသိ။ ဒီလိုနဲ့ သူငယ်ချင်း တွေနဲ့ အတူ မာစတာ မပြီးခင်ပဲ ဆရာမ ၀င်လုပ်ခဲ့သည်။ ဂုဏ်သရေရှိ Professional တစ်ခု အနေနဲ့ ... ပြီးတော့ Ph.D ဆက်တက်ဖို့ အခွင့်အလမ်း တစ်ခု အနေနဲ့ လုပ်ခဲ့ပေမယ့် စာသင်တဲ့ အလုပ်ကို သီ လုံးဝ ၀ါသနာမပါ။ မပါပေမယ့်လည်း Ph.D ဒေါက်တာ ဖြစ်ဖို့ဆို ဒီအလုပ်လုပ်မှပဲ ဖြစ်နိုင်မည်။ သီ့ မိသားစု မှာ သီ့ကို နိုင်ငံခြားပို့ပြီး ကျောင်းထားနိုင်မယ့် အင်အား မျိုးမှ မရှိလေပဲ။ ဒါနဲ့ပဲ သီက ရည်မှန်းထားတာ မဟုတ်ပါပဲ တက္ကသိုလ် ဆရာမကလေး ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ဒီလိုပါပဲလေ... လူအများစုရဲ့ Professional တွေဟာ ရည်မှန်းမထားပဲ ဖြစ်ခဲ့ရတာတွေပါ။ သီ့ဝါသနာအရ အကောင်အထည်ဖော်ချင်တဲ့ အိပ်မက်တချို့ကိုတော့ နောင်တစ်ချိန်ချိန် အတွက် သိမ်းထားခဲ့သည်။ ဖွင့်ပြောရင်လည်း အများက လှောင်ချင်ကြလိမ့်မည်။
သီက ငှက်တစ်ကောင် ပါ။ လောလောဆယ်တော့ လှောင်ချိုင့်ထဲမှာ ခဏ နေနေပါသည်။ ကိုယ်ဟာကိုယ် တိုးဝင်လာခဲ့တာပါ။ သီက သင်ယူရမှာကို နှစ်သက်တဲ့သူ။ ဒါပေမယ့် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် စိတ်လက်ပေါ့ပါးစွာပဲ လေ့လာသင်ယူချင်သည်။ စိတ်အားထက်သန်မှု နဲ့ စိတ်ကြည်လင်မှု ရှိမှ Research ဆိုတာကို ကောင်းကောင်း လုပ်နိုင်မည်ဟု သီကထင်သည်။
သီတို့ အားလုံးက စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ပရမ်းပတာ နေတတ်သူ တွေမဟုတ်ရပါပဲ… ခုချိန်မှာတော့ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း ဆိုတဲ့ စကားကိုပင် မကြားချင်လောက်အောင် ဖြစ်လာရတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ ကန့်သတ်ချက်တွေ တင်းကျပ်မှုတွေ ဆိုတာ များလွန်းရင်၊ လက်မခံနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်လာခဲ့ရင် ချိုးဖောက်ချင်လာတတ်သည် ဆိုတာ အမှန်ပါပဲ။
အိမ်မှာဆို ငယ်ငယ်ကတည်းက တစ်ခါမှ နစ်နစ်နာနာ ဆူပူအော်ငေါက်တာမျိုး မခံခဲ့ရဖူး။ ဒီသင်တန်းကို တက်ကာမှ တစ်ယောက်တည်းရော အများနှင့်ရော ရစရာ မရှိအောင် အပြောအဆိုတွေ ခံနေရသည်။ အဆောင်က ကန့်သတ်မှုကတစ်မျိုး၊ ကျောင်းက ကန့်သတ်မှုကတစ်မျိုး။ လူဆိုတာ အမြဲတမ်းတော့ အမှားနှင့် မကင်းနိုင်ပါ။ စက်ရုပ်တွေလိုတော့ အတိအကျ Program အတိုင်း အမှားကင်းကင်း လုပ်နိုင်ပါ့မလား။
ဆရာမ မလုပ်ချင်ပဲ အမြဲတမ်း ကျောင်းသားပဲ ဖြစ်ချင်ခဲ့သော သီသည် ရှည်လျားလွန်းသော ကျောင်းချိန်ကို စိတ်ပျက်လာသည်။ သီက ညလူ ဆိုတော့ ညဘက်မှာပဲ စာလုပ်ဖြစ်တာများသည်။ မနက်ကို နောက်ကျမှ အိပ်ရာထချင်သည်။ ၈ နာရီ ကျောင်းကို မီဖို့အတွက် အမြဲတမ်း ပြာယာခတ်ရသည်။ ဒါတောင် သီက သူများတွေလို ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ ဟင်းတွေ ချက်တတ်သူ မဟုတ်လို့။ ချက်ရင်လည်း ကျောင်းမီမှာ မဟုတ်တော့။ တစ်ပတ်တစ်ခါ လောက်သာ အကြော်အလှော် လုပ်ထားပြီး ဖြစ်သလိုစားသူ။ ကျောင်းနားက ဆိုင်မှာ အမြဲ အားပေးတတ်သူ ဖြစ်သည်။
ညဘက် အိပ်တာ အရမ်းနောက်ကျ သွားတဲ့နေ့တွေမှာ အိပ်ရေးမ၀ သဖြင့် နေ့ခင်းဘက် အိပ်ငိုက်ပြီး စာလည်း ကောင်းကောင်း မလုပ်ဖြစ်ပဲ တနေကုန် စက်ခန်းထဲနေရတာ အဓိပ္ပါယ်မရှိ သလိုပင်။ စာလုပ်စေချင်၍ ကျောင်းခန်းထဲ ထည့်ထားသော်လည်း လူတွေကို သာချုပ်ကိုင်၍ ရမည်။ မထက်သန်သော၊ ပျင်းရိငြီးငွေ့သော စိတ်တွေကိုတော့ သူတို့ လိုချင်သလို ချုပ်ထိန်း၍ မရနိုင်ပါ။ မနက် ၈ နာရီက ညနေ ၆ နာရီ သုံးနေရသော သီ့ကျောင်းက ကွန်ပျူတာကို သဘောမကျပဲ အဆောင်က သီ့ ကွန်ပျူတာမှာပဲ သီလုပ်လက်စလေး တွေကို ဆက်လုပ်ချင်နေတာက ခက်သည်။ နှေးကွေးလေးလံတဲ့ ကျောင်းကစက်က မကြာခဏ ရေနစ်တတ်တဲ့ Internet သုံးဖို့လောက်ပဲ ကောင်းသည်။ ဒီ ကျောင်းခန်းထဲမှာက သီးသန့်မရှိသော နေရာမှာ သူငယ်ချင်းတွေနှင့် အတူတူ ထိုင်ရတာမို့ စကားတွေ ပြောဖြစ်ကြသည်။ စာထဲမှာ အာရုံဝင်စားဖို့ အတော် ကြိုးစားရသည်။ သီက တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် နှင့်တစ်ယောက်ထဲနေမှ ပိုပြီး အလုပ်ပြီးသည်။ ညဘက် အခန်းထဲမှာ စာလုပ်ဖို့ စိတ်က ထက်သန်သည်။ ဒါပေမယ့် တနေကုန် ပင်ပန်းလာသော လူကမခံနိုင်၊ မျက်စိက မခံနိုင်။ နားချင်သည်။
သီ အတွက် ၂၄ နာရီ Internet မရှိလည်းရသည်။ သီ့မှာ အမြဲတမ်း chat နေသည့် online friend တွေလည်း မရှိ။ သီ့က အရမ်းရင်းနှီးသူ သူငယ်ချင်းတွေလောက်ကိုသာ စကားများများ ပြောတတ်သူဖြစ်သည်။ တစ်ခါမှ မသိဘူး သူတွေနှင့် ဘာအကြောင်းအရာတွေ ပြောရမှာလဲ။ သီ စာရှာချင်သည့် အချိန်မှာ ကျောင်းကို သွားပြီး လိုချင်သည့် references တွေရှာမည်။ ပြီးရင် အခန်းထဲမှာ ကိုယ့်စာကို ပြီးအောင်လုပ်ချင်သည်။ ပြီးရမည့် အချိန်မှာ ပြီးအောင်လုပ်ဖို့ကို သီ့ကို ဘယ်သူမှ တိုက်တွန်းစရာ မလိုပါ။
အရည်အချင်းစာမေးပွဲ ဆိုတာမျိုးတွေလည်း သီကမုန်းသည်။ သီက အစကတည်းက စာကျက်အားသန်သူ မဟုတ်။ တိတ်ဆိတ်သော ပတ်ဝန်းကျင်မှာမှ စာကကျက်ချင်သည်။ အင်္ဂလိပ်စာ ဆိုတာကိုလည်း ဆယ်တန်းမှာ အမှတ်နည်းကတည်းက ငယ်ကြောက်လိုဖြစ်နေတော့ သီစိတ်တွေညစ်လာသည်။ Researcher တစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်းကို စစ်ဆေးဖို့ အင်္ဂလိပ်စာက ပိုအရေးကြီးလား၊ သူ့Researchရဲ့ ပြီးမြောက်မှုနဲ့ အရည်အသွေးက ပိုအရေးကြီးသလား…။ မတွေးတတ်တော့ပါ။ ဒီလမ်းကို သီမကြိုက်တော့သည်ပဲ ဖြစ်စေ လမ်းတစ်ဝက်ကတော့ ဘယ်တော့မှ လှည့်မပြန်ပါ။ မိဘပိုက်ဆံတွေ အများကြီး ဖြုန်းတီးထား ရသည့် ဒီဘွဲ့တစ်ခုကို သီ ရအောင်တော့ယူမှာပါ။
အခု လောလောလတ်လတ် နှစ်များမှာ ဒီအလုပ်က ထွက်ပြီး တစ်ခြားပြောင်းဖို့ သီမှာ လုံးဝ စိတ်ကူးမရှိ။ အပြင်မှာ လုပ်ဖို့ လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင် Experience လည်းမလုံလောက်ဟု သီကိုယ်သီထင်သည်။ ဒီအလုပ်မ၀င်ခင်က ခဏတဖြုတ်လောက်ပဲ လုပ်ကြည့်ခဲ့ဖူးတာ။ အဲဒီတုန်းကလည်း ကိုယ့်မှာ ဒီပညာနဲ့ တက္ကသိုလ်က ဘွဲ့ရထားပါလျက် သူတို့သင်တန်းက ဆင်းသူတွေ လက်အောက်မှာ အနှိမ်ခံခဲ့ရသေးသည်။ သို့ပေမယ့် သီက ချည်နှောင်ချင်သော ကြိုးတွေကို မုန်းသည်။ နှစ်အကန့်အသတ်တွေ၊ ငွေကြေး အလျော်အစားတွေ ကို မုန်းသည်။ တစ်သက်တာလုံး ပင်စင်ယူတဲ့ အထိတော့လည်း ဒီအလုပ်ကို လုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်မရှိ။ သီက ယုံကြည်ချက် တစ်ခုနှင့် လွတ်လပ်စွာ ပျံသန်းချင်သူဖြစ်သည်။
သီ့လခက သီ့ စားဝတ်နေရေး နှင့် ကျောင်းစားရိတ် အတွက် လောက်အောင် သုံးနိုင်သော ပမာဏမ မဟုတ်။ ကြာတော့ ဒီအရွယ်အထိ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ် မရပ်နိုင်ပဲ အိမ်ကို လက်ဖြန့်နေရသည့် ဘ၀ကို သီစိတ်ပျက်သည်။ ဒီအရွယ်အထိ မိဘအပေါ် တပြားတချပ်မှ မထောက်ပံနိုင်ပဲ ဒုက္ခပေးနေရသည့် ဒီလမ်းကို သီဘာကြောင့် ရွေးခဲ့ရသလဲ၊ ဘယ်အချိန်မှာ ပြန်ပြင်လို့ ရဦးမလဲ တွေးနေပေမယ့်လည်း လမ်းပျောက်နေသလို ခံစားရသည်။
သီ အသက်သုံးဆယ် ရှိခဲ့ပြီ။ သိမ်းထားတဲ့ အိပ်မက်တွေကို အခုထိ အကောင်အထည် ဖော်ဖို့ အခွင့်အရေး မရသေး။ သီလိုချင်ခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေက အလှမ်းမမီနိုင်တဲ့ အဝေးမှာ…။ သီ့ အပေါ်ကောင်းခဲ့တဲ့ မိဘတွေကိုလည်း ကိုယ်ပိုင် ၀င်ငွေနှင့် တင့်တင့်တယ်တယ် ထားချင်သည်။ ဒါကလည်း အဝေးက အိပ်မက် ဖြစ်နေဆဲ။ သီက ငှက်တစ်ကောင်ပေမယ့် ပျံသန်းဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် မှားယွင်းနေခဲ့တော့လည်း မြင့်မြင့် မပျံနိုင်ဖြစ်ရသည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သီက အိပ်မက်တွေကို သိမ်းထားဆဲပါ။ လွှင့်ပစ်ဖို့တော့ စိတ်ကူးမရှိ။ တစ်နေ့မှာတော့ သီပျံသန်းချင်တဲ့ နေရာမှာ ကျေနပ်စွာ ပျံသန်းဦးမှာပါ။ သီသီမာဟာ မသေမချင်း ပျံသန်းနေရမယ့် ငှက်တစ်ကောင်ပဲလေ။
2 comments Labels: ခံစားမှုစာစု
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဂျပန် အရုပ် ကလေးတွေပါ။ သဘောကျကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
0 comments Labels: ကြည့်စရာ
တန်ဖိုးမရှိတဲ့ ရလဒ် တစ်ခုအတွက်
1 comments Labels: ကဗျာ
Numbers have been thought to hold mystic significance from the beginning of time. If a
certain number keeps coming up in your life it would be wise to pay attention to that
number's meaning. Some believe thataperson's number could even represent the
development of the soul. According to this dictum, everyone must go throughaseries of
stages in order to attain perfection, and the first stage is represented by the number
one, and the highest level of development is represented by the number nine. In other
words, if your number is one, you may beanew soul, but if your number is nine, you're
about as close to perfection asahuman being can be.
So how do you determine your number? Well, below areacouple of methods that are
The first one is based on your name. Write down your name onapiece of paper, then
look up the corresponding numbers on the graph below. Then add all the numbers
together, and keep adding them until you arrive atasingle number. After you have the
number, look at the list below to see what your number means.
For instance Bill Gates would be 2+9+3+3+7+1+2+5+1=33 Then add 3+3 together to
makeasingle digit, 6. So Bill Gate's number is 6. He's fairly high up there in the way of
Another method to find your number is to add the numbers of your birthdate inasimilar
way. Suppose you were born on February 2, 1975, you'd arrive at your number like this:
0+2+0+2+1+9+7+5=26. Then add the two numbers together, 2+6, to equal 8.
But what else do these numbers mean? Well, here'salist withashort description of
1. You may be at the very beginning of your development. In other words, you'reanew
soul with much to learn, so you're naturally curious about everything. You often find
yourself digging through books at the library. You're alsoaperson who likes long and
lasting relationships. You'realeader, and possiblyaworkaholic. You generally take on
too much responsibility. But you're strong and you recover quickly. You have faith in
yourself and your abilities. You are compatible with people whose numbers are4or 9.
2. You areavery happy person, usually at peace with yourself and the things that are
going on around you. One of your weaknesses could be that you are very sensitive,
easily hurt. Yet, you're very good with finanical matters, and can buildahighly
successful business. Your romantic partner should bea7 ora9.
3. You're the serious type, and you study all things around you similarly toascientist.
You need to relax more and have fun. You sometimes take everything too seriously.
You're compatible with number5and 6.
4. you're the affectionate one. Unfortunately, you can also be overly possessive...and
can be consideredahoarder. Still, there are moments when you are overly generous,
and when you are, your luck seems to improve considerably. This is an important lesson
for you to learn in order for your soul to grow and move on to the next step. You
compatible numbers are 1 and 6.
5. You're the giving one. You always give more than you take. You often share not only
your affection, but material things such as money. You haveasense of humor and are
outgoing and friendly. You are well liked by most people you meet even if you are a
practical joker sometimes. You're compatible with5and 3.
6. You're the go-getter. You may be an athelete, since you're very physically active. Your
weakness is your jealousy. You often haveatendency to get jealous over minor things.
You should learn to curb these petty feelings in order to move to the next level of
achievement. You're compatible with2and 3.
7. You're the sympathic one. Unfortunately, you haveadifficult time showing your
emotions sometimes, and people could mistake this for coolness. You're also very neat
about yourself and your environment. You have an excellent sense of organization.
You're compatible with4and 6.
8. You're fond of luxury and spending money, which could be your weakness. You love
nothing more than havingagood time. You are loyal and stable, but can be possessive
and stubborn at times. You're compatible with 1 and 6.
9. You're at the end of your soul's development. You are imaginative and creative, an
artist or author,amusician, or dancer...or you work in some other creative field. Doing
what you love most is more important to you than makingalot of money. You lovealot
of color and drama. You are alsoavery sensuous lover, but you haveatendency to let
your heart rule your head. You're compatible with 1 and 9.
1 comments Labels: ဗေဒင်
၁၉၀၄ ခုနှစ်တွင် တင်းနိစ္စပြည်နယ် နောက်စ်ဗီးလ်မြို့၌ မီးရထားလမ်းဆောက်လုပ်ရေး မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာတွေ စခန်းချလေသည်။ အယ်လ် အင် အမ်စခန်းတွင် ယောက်ျားသားများအတွင် တဲစခန်းများ၊ နွေးထွေးသော မီးဖိုများ၊ လက်ရာကောင်းသော စားဖိုမှူးများနှင့် ခေတ်အမီဆုံးသော လက်နက်ကိရိယာတွေ အစုံအလင် ရှိသည်။ အမှန်မှာတော့ ရာစုနှစ်အလှည့်အပြောင်း တစ်ခုတွင် မီးရထားလမ်း ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် မြို့ပြအင် ဂျင်နီယာ တစ်ယောက်အဖြစ် အလုပ် လုပ်ရခြင်းသည် တကယ့်ကို နောက်ကြောင်း ပြန်လှည့် ချင်စရာကောင်းလှသည်။ လူပျိုလှည့်ချင်စရာ မိန်းကလေးများက အလုပ်ခွင်နယ်ပယ်မှာ အလွန်ကို ရှားပါး လှသည် မဟုတ်လား။
ဘင်ဂျမင် မာရဲလ်သည် ထိုကဲ့သို့သော အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူသည် အရပ်ရှည် ရှည်နှင့် နှုတ်ဆိတ်နေတတ်ကာ လူတွေနှင့်ပတ်သက် လျှင် သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ ဆက်ဆံပြောဆိုတတ်သည်။ အေးအေးချမ်းချမ်း နေတတ်သည်။ သူသည် နယ်လှည့် သွားလာနေရသော မီးရထားလမ်း အင်ဂျင်နီယာဘ၀ကို ပျော်မွေ့နေသူဖြစ်သည်။ သူ့အသက် ၁၃နှစ်အရွယ်မှာ မိခင်ဖြစ်သူ ဆုံးပါးသွားခဲ့သည်။ ငယ်ရွယ်စဉ်မှာပင် ဆုံးရှုံးမှုတွေ ကြီးမာခဲ့၍ သူသည် တစ်ကိုယ်တည်းနေတတ် လာခဲ့သည်။
သူသည်လည်း တခြားယောက်ျားသားတွေလို ပင် တစ်ခါတရံမှာ မိန်းမသားအဖော် ရှိချင်သည့် ဆန္ဒမျိုး တောင့်တတ်သည်။ သို့ရာတွင် သူ၏ ဆန္ဒကို သူနှင့် ဘုရားသခင်မှလွဲ၍ မည်သူမျှမသိအောင် သိုသိပ်ထား သည်။ ထူးထူးခြားခြား အမှတ်ရစေနိုင်လောက်သည့် နွေဦးတစ်နေ့မှာတော့ အလွန်ထူးခြားလှသော သတင်း ကောင်းသည် သူတို့စခန်းအတွင်းသို့ ပျံ့နှံ့လာ၏။ ထို သတင်းကတော့ သူတို့စခန်းအကြီးအကဲ၏ ခယ်မအလည်လာမည် ဆိုသည့် သတင်းပင်ဖြစ်သည်။ စခန်း မှာ ရှိနေသူတွေအားလုံးကလည်း သူမနှင့်ပတ်သက်၍ အချက်သုံးချက်ကိုသာ သိထားကြသည်။ တစ်ချက်က သူမ၏အသက်သည် ၁၉နှစ်၊ ဒုတိယတစ်ချက်က သူမ သည် အပျို၊ တတိယအချက်က သူမသည် အလွန်လှသည်ဟူ၍ပင်။ ထိုနေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် စခန်းရှိလူများသည် သူမ၏ အကြောင်းကို ဟိုစစ ဒီစစ ပြောဆိုလာကြ၏။ သူမ၏ မိဘများက တောင်ပိုင်းဒေသတွင် ကူးစက်ပျံ့နှံ့လာသော အသားဝါရောဂါဆိုးမှ လွတ်မြောက်ရန်အတွက် သူမကို ဤစခန်းသို့ လွှတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ နောက်သုံးရက်ဆိုလျှင် သူမ ဒီစခန်းကို ရောက်လာပေတော့မည်။ စခန်းမှ တစ်ယောက်က သူမ၏ဓာတ်ပုံကို တွေ့သောကြောင့် ထိုဓာတ်ပုံသည် စခန်းတစ်ခုလုံးသို့ ပျံ့နှံ့သွားပြီး သူမကို သူ့ထက်ငါ အပြိုင်အဆိုင် စိတ်ဝင်စားနေကြလေသည်။
ဘင်သည် ထိုမိန်းကလေး ရောက်လာမည့် အရေးအတွက် ကြိုတင်ကာ ပျော်မြူးနေသည့် သူ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သူငယ်ချင်းများကို စောင့်ကြည့်နေသည်။ တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးသည့် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို အရူးအမူးဖြစ်နေကြသည့် သူ့သူငယ်ချင်းတွေကို နောက်ပြောင်နေသည်။
“ဘင်၊ မင်း သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံကို တစ်ချက်ကလေး တော့ ကြည့်လိုက်ကွာ၊ ပြီးတော့မှ မင်းစိတ်မ၀င်စားဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း ငါတို့ကို ပြောပြ” ဟု သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဘင့်ကို မခံချင်အောင်ပြောသည်။ သို့ရာတွင် ဘင်ကတော့ ခေါင်းကိုခါပြီး တဟားဟားရယ် ရင်း ရှောင်ထွက်သွားသည်။
နောက်ထပ် နှစ်ရက်ကုန်လွန်သွားသောအခါ စခန်းမှာရှိနေသည့် လူတွေအားလုံးသည် မိမိတို့၏ အလုပ်ကိုပင် အာရုံမစိုက်နိုင်လောက်အောင်ပင် ဖြစ်နေကြသည်။ သူမ စီးလာမည့်ရထားသည် စနေနေ့ မနက် စောစော အချိန်တွင် ဆိုက်ရောက်လာတော့မည်။ ထို့ကြောင့် ပိုးပန်းလိုသူတို့သည် မိမိတို့၏ အကြံအစည်များ ကို အသေးစိတ် ပြောဆိုဆွေးနွေးနေကြသည်။ သူတို့ အားလုံးသည် ရေမိုးချိုးသန့်စင်၍ ခေါင်းမှာ ဆီတွေ ပြောင်လက်နေအောင်လိမ်းကာ ဆံပင်တွေကို နောက်လှန်ဖြီးသင်ထားပြီး သူမအလွယ်တကူ မေ့မသွားနိုင်လောက်အောင်ပင် သွားရောက် ကြိုဆိုကြမည် ဖြစ် သည်။ ထိုအခါ သူမသည် သူတို့အုပ်စုကို သေသေချာ ချာ ကြည့်ပြီး အချောမောဆုံးတစ်ယောက်ကို ရွေးချယ် ကာ ချစ်သူအဖြစ်ရွေးချယ်လိမ့်မည် ဟု သူတို့ ထင်နေကြသည်။ ကံအထူးဆုံးလူ အနိုင်ယူကြေးဟု သူတို့ အချင်းချင်း ညှိနှိုင်းသဘောတူထားကြသေးသည်။ ကိုယ်စီကတော့ မိမိသည်သာ မဟာကံထူးရှင်ဖြစ်ရမည်ဟု သွေးနားထင်ရောက်နေကြလေသည်။
သောကြာနေ့ညမှာတော့ စခန်းရှိ လူများသည် စနေနေ့မှာ ၀တ်စားဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်နေကြသည်။ ရေချိုးသူက ချိုးသည်။ ဘင်သည် စခန်းမီးပုံဘေးရှိ သစ်တုံးပေါ်တွင် ထိုင်နေ၏။ မီးပုံ၏ မီးအလင်းရောင်ထဲတွင် လိမ္မော်ရောင် တစ်စုံတစ်ရာ လက်ခနဲဖြစ်သွားသည်ကို ဘင် တွေ့လိုက်ရသည်။ သူသည် ထိုအရာကို ချက်ချင်းကောက်ယူလိုက်၏။ သူ့ သူငယ်ချင်းများသည် သူတို့၏ အရေးအတွက် အလုပ်ရှုပ်ပြီး၊ မိမိကိုယ်မိမိသာ ဂရုစိုက်နေကြသော ကြောင့် မိန်းကလေး၏ ဓာတ်ပုံကို မြေကြီးပေါ်မှာ ဒီအတိုင်း ပစ်ချထားခဲ့ကြခြင်းဖြစ်မည်။ ဘင်သည် မိန်းကလေး၏ ဓာတ်ပုံကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ကိုင်ကြည့်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ကြသော စခန်းရှိ လူများသည် အလွန် တအံ့တသြ ဖြစ်သွားကြသည်။ သို့သော်လည်း ဘင်သည် ဗာဂျီးနီးယားဂရေ့စ်၏ ဓာတ်ပုံကို ပျောက်ဆုံးနေသည့်ရတနာတစ်ပါး ကို သူ့လက်ကြီးထဲမှာ ကိုင်တွယ်ထားသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ထိုဓာတ်ပုံကို အကြာကြီး စိုက်ကြည့်နေသည် ကိုသော်လည်းကောင်း မည်သူမျှ သတိမထားမိကြပေ။ ဓာတ်ပုံထဲက မချောလေး၏ ပုံကို ပထမဦးဆုံးစကြည့်မိစဉ်မှာ ပြောင်းလဲသွားသည့် ဘင်၏ မျက်နှာအမူအရာကို မည်သူမျှ သတိမထားမိကြပါ။ ဘင်၏ မျက်နှာအမူအရာ မှာ တစ်ခဏချင်းမှာပင် စခန်းရှိလူများအားလုံးသည် သူ၏ ပြိုင်ဘက်တွေ ဖြစ်သွားကြပြီဟု ယူဆရမည့် မျက်နှာထားပင် ဖြစ်လေသည်။ ဘင်တစ်ယောက် သူ့တဲဆီသို့ ပြန်သွားကာ နေ၀န်းကြီးတောင်စွယ်မှာ ၀င်သွားသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ကျောပိုးအိတ်ကိုလွယ်ပြီး စခန်းမှ ထွက်ခွာသွားသည်ကို မည်သူမျှ မသိလိုက်ကြပေ။
နောက်တစ်နေ့မနက်ခင်းမှာတော့ အယ်လ်အင် အမ်စခန်းမှ ကိုယ်တော်ချောတွေအားလုံး မီးရထားဘူတာရုံမှာ စုရုံးနေကြလေသည်။ ဗာဂျီးနီးယား၏မိသားစုမှာလည်း စခန်းမှ ကိုယ်တော်ချောများ၏ ပုံတွေကိုကြည့်ပြီး မရယ်မိဘဲ မနေနိုင်အောင် ဖြစ်နေကြလေသည်။ စခန်းမှ လူများ၏ မျက်နှာတွေမှာ ရွက်ကြမ်းရေကျိုမှ အစ မုတ်ဆိတ်ရိတ်သင်ထားသည့် မျက်နှာတွေအဆုံး အမျိုးစုံနေသည်။ အပေါစားရေမွှေးအစုံကိုလည်း ဆွတ်ဖျန်းထားကြလေသည်။ ဘူတာကို လာကြသည့် လူတွေထဲမှ အများစုသည် လမ်းမှာတွေ့သော တောပန်းများကိုပင် ခူးလာခဲ့ကြလေသည်။
နောက်ဆုံးတော့ ကြာမြင့်စွာ စောင့်ဆိုင်းနေရသည့် ရထားဥသြသံကို ကြားရပြီးနောက် ရထားကြီး ဘူတာထဲသို့ ဆိုက်လာသည်။ အယ်လ် အင် အမ်စခန်း တစ်ခုလုံးက မျှော်လင့်တကြီး စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ရသော မချောလေးသည် ရထားပေါ်မှ ပလက်ဖောင်းပေါ်သို့ ဆင်းလာပါတော့သည်။ သူမကို မြင်လိုက်ရသော ကိုယ်တော်ချောများမှာ သက်ပြင်းသက်မ အကုန်ချကြလေသည်။ သူမသည် သူတို့မြင်ခဲ့ရသည့် ဓာတ်ပုံထဲက ထက်ပင် ပိုပြီး ချောမောလှပနေသေးသည်။ နောက် တော့ လာကြိုကြသူအပေါင်း၏ နှလုံးသားတို့မှာ လွန်စွာ စိတ်ပျက်သွားကြလေသည်။ အကြောင်းမှာ သူမ၏ လက်ကို ပိုင်စိုးပိုင်နင်းဖြင့်တွဲလျက် အစွမ်းကုန်ပြုံးနေသည့် ဘင်ဂျမင်ကိုပါ တွေ့လိုက်ရသောကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။ မချောလေးကလည်း ဘင်ဂျမင်ကို မော့ပြီးပြုံးပြ နေသည်ကိုပါတွေ့လိုက်ရ၍ ပိုးချင်ပန်းချင်နေကြသော လာကြိုသူအပေါင်းတို့မှာ သူတို့ကြိုးစားလည်း အလကား ပဲဆိုတာကို သဘောပေါက် သွားကြလေသည်။
နောက်တော့ ဘင်၏ သူငယ်ချင်းများက “မင်း ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ရထားပေါ်မှာ ပါလာရတာလဲကွာ” ဟု ၀ိုင်းမေးကြ၏။
ထိုအခါ ဘင်က “မင်းတို့တွေအကုန်လုံးနဲ့အတူ ငါပါရောပြီး သူကလေးကို ပိုးပန်းဖို့ ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် ငါ့မှာ အခွင့်အရေးရဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာ ငါသိတယ်ကွ။ သူ့ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို ခံချင်ရင် သူ့ကို အရင်ဆုံး မြင်ခွင့်ရမှ ဖြစ်မယ်ဆိုတာကို ငါ သဘောပေါက်ထားတယ်လေ။ ဒါကြောင့် ငါလည်း ဒီဘူတာရဲ့ ရှေ့က တစ်ဘူတာကို လမ်းလျှောက်သွားပြီး သူ စီးလာမယ့် ရထားကို သွား စောင့်နေတာပေါ့။ ရထားရောက်လာတော့ ငါလည်း ရထားပေါ်တက်ပြီး ငါ့ကိုယ်ငါ သူ့ကိုလာရောက်ကြိုဆို တဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက် ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြောပြလိုက်တယ်”
“ဟ၊ ငါတို့နဲ့ အနီးဆုံးဘူတာက ၁၇မိုင် လောက်ဝေးတာပဲက” ဟု ဘင့် မိတ်ဆွေတွေထဲမှ တစ်ယောက်က မယုံနိုင်သလို ၀င်ပြောသည်။
“မင်း သူစီးလာတဲ့ ရထားကိုမီဖို့ဆိုရင် ၁၇မိုင် လောက် လမ်းလျှောက်ရမှာပဲ။ ၁၇မိုင် ဆိုတဲ့ခရီးက တစ်ညလုံးတောင် လျှောက်ရမှာ” ဟုလည်း ဆိုသည်။
“အေးလေ၊ ငါ တစ်ညလုံး လမ်းလျှောက်သွား ခဲ့တာပဲ” ဟု ဘင်က ပြန်ဖြေသည်။
ထိုသို့ဖြင့် ဘင်ဂျမင် မာရဲလ်သည် ဗာဂျီးနီးယား ဂရေ့စ်ကို ပိုးပန်းခဲ့ရာ အချိန်တန်သောအခါ သူတို့နှစ်ယောက် ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားကြပြီး အိမ်ထောင်ပြု လိုက်ကြလေသည်။ သူတို့တွင် သားသမီး ငါးယောက် မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၁၂နှစ်အရွယ်သားကလေးတစ်ယောက်က တော့ ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့် အထင်ပြောရလျှင် သူတို့နှစ်ယောက်သည် တချို့ အမျိုးသမီးမဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ရေးကြသလို ထာဝရမကုန်ခမ်းနိုင်သော အချစ်မျိုးကို ထူထောင်ကြမည်မဟုတ်ပါ။ သောကြာနေ့တိုင်း ချိန်းတွေ့ကြတာမျိုးလည်း ရှိခဲ့မည်မဟုတ်ပါ။ လက်တွေ့ဘ၀ မှာတော့ ဘင်သည် ဗာဂျီးနီးယားနှင့် အချိန်ပြည့် နေရရှာသည် မဟုတ်ပါ။ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက် ၏တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေရသည်။ သူတို့သမီးလေး မွေးစဉ်ကဆိုလျှင် ဘင်သည် သမီးတစ်လပြည့်မှသာ မြင်တွေ့ရသည်။ ဘင်သည် ဗာဂျီးနီးယားကို အလွန် ဈေးကြီးသော စားသောက်ဆိုင်များသို့ ခေါ်မသွားပါ။ ချစ်သက်လက်ဆောင်ဟူ၍ ပေးဖူးသည်မှာလည်း ရံဖန်ရံခါမှသာ ၀ယ်ပေးဖြစ်သည့် သံလွင်ဆီပုလင်းများသာ ဖြစ်သည်။ ဗာဂျီးနီးယားသည် ည၀တ်အင်္ကျီကိုဝတ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာကိုပတ်ကာ ဘင်ကို လိုက်ဖမ်းသလားဆို တာကိုတော့ ဒီကနေ့အထိတိုင် မသိနိုင်သော လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုအဖြစ် ရှိနေပါသည်။
ကျွန်တော်သိသမျှ သူတို့အကြောင်းကတော့ သူတို့သည် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်သစ္စာရှိခြင်း၊ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် လေးလေးစားစားနှင့် တွေးတွေးဆဆ ဆက်ဆံခြင်း၊ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေထိုင်ခြင်း ဖြင့် အိမ်ထောင်ရေးဘ၀ကို တည်ဆောက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့် သားသမီးများ ကိုပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့သည်။ အခက်အခဲ ကာလများကို ရင်ဆိုင်ရာတွင်လည်း တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် မေတ္တာမပြယ်ခဲ့ပေ။
ကျွန်တော်သည် ဘင်နှင့် ဗာဂျီးနီးယားတို့၏ မြစ်တွေထဲမှ တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်ကလေး ဘ၀ကတည်းက ဘိုးဘိုးဘင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော် ဘိုးဘိုးကို သေသေချာချာ မမှတ်မိတော့ပါ။ ဘွားဘွား ဗာဂျီးနီးယားကတော့ ကျွန်တော့်အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ဘွားဘွား ကွယ်လွန်ချိန်တွင် ၈၅ နှစ် ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ကတော့ ဘွားဘွားသည် ဟိုနားဒီနား လမ်းလျှောက်မသွားနိုင်သောကြောင့် တစ်ယောက်ယောက် ဖေးကူမှသာ သွားလာနိုင်သည်။ ဘွားဘွားသည် အရိုးအဆစ်ယောင်သောရောဂါကြောင့် ခါးလည်း ကိုင်းနေပြီဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က ဘွားဘွားသည် အရိုးအဆစ်ယောင်သည့် ရောဂါကြောင့် ဝေဒနာခံစား နေရသည့် လူမမာတစ်ယောက် ဖြစ်နေသော်လည်း ဘိုးဘိုးနှင့် တွေ့စကမူ အလွန်စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသည့် မိန်းမချောလေးတစ်ယောက် ဖြစ်နေမှာ သေချာလှပါ သည်။ ထိုစဉ်က ဘိုးဘိုးသည် ဘွားဘွားနှင့် တွဲကခဲ့ပေလိမ့်မည်။ ဘွားဘွားက ကျွန်တော်တို့ကို ပြောလေ့ပြောထရှိသည့်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်မှာ တစ်ချိန်က သူသည် အလွန် ချောမောလှပသည့် မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ သူ၏စိတ်ဝင်စားမှုကို ခံရဖို့အတွက် မီးရထား စခန်းတစ်ခုလုံးမှ ကိုလူချောတွေက ဘူတာမှာလာကြိုကြသည့် အကြောင်းများဖြစ်သည်။ ထိုကိုလူချောတွေထဲမှ တစ်ယောက်သောသူသည် သူ၏ အချစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရပြီး သူနှင့် အိမ်ထောင်ပြုချင်သည့်အတွက် ၁၇ မိုင်ခရီးကို ခြေလျင်လျှောက်ပြီး လာခဲ့ရကြောင်းလည်း မဖြစ်မနေ ပါလေသည်။
Ben and Virginia By Gwin Williams
2 comments Labels: ဖတ်မိသောစာများ, ဝတ္တုတို
0 comments Labels: ဖတ်မိသောစာများ